Archives malaza • Fahalalana FAHOMBIAZANA
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana4002 hevitra
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana4802 hevitra
In-Lalina COVID-19: Hanao ahoana izao tontolo izao rehefa afaka sivy volana?
Tamara Abrams Jona 25, 2020
Ny COVID-19 dia nanova ny fiainantsika ary, mety ho manan-danja kokoa, maro amin'ireo eritreritray momba ny fiantraikan'izany eo amin'izao tontolo izao. Manahy mafy ireo manam-pahaizana momba ny fandrindram-pianakaviana fa mety hiteraka fahatapahana ny rojo famatsiana fanabeazana aizana ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana3364 hevitra
tahirin-kevitra Inona no mety ho an'ny fivarotana zava-mahadomelina hanatsarana ny fidirana amin'ny tsindrona?
Victoria Lebrun Jona 9, 2020
Ny tsindrona no fomba fandrindram-pianakaviana malaza indrindra any Ouganda saingy, hatramin'ny vao haingana, Ny mpiasan'ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina sy ny tobim-pahasalamana sy ny hopitaly ihany no natolony. Mifanohitra, ny firenena 10,000 fivarotana zava-mahadomelina, izay manome ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana4061 hevitra
Vakio haingana Manome fahalalana ny Ankizivavy sy ny Zatovovavy ny Fitandremana, fahaiza-manao, ary Fanohanana handresena ireo fanamby
Suzanne FischerKate Plourde MEY 27, 2020
Eran-tany, Miatrika fanamby maro isan-karazany amin'ny fahasalamany sy ny fahasalamany ny tovovavy sy ny zatovovavy. Ny fikarohana momba ny fiantraikan'ny fitarihana dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny modely tsara sy ny rafitra fanohanana ara-tsosialy amin'ny fanatsarana ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana4645 hevitra
In-Lalina Moa ve isika mijanona ho mahatoky amin'ny fanoloran-tenantsika amin'ny tanora?
Tamin'ny Oktobra 2018, mihoatra ny 100 fikambanana nanao sonia ny Global Consensus on Meaningful Adolescent and Youth Engagement (MEY). Mipetraka ny fanontaniana: inona no fiantraikan'ny MAYE? Nanontany tanora vitsivitsy izahay ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana3632 hevitra
Ity ampahany ity dia mamintina ny traikefa amin'ny fampidirana ny fandrindrana ny fianakaviana sy ny fahasalaman'ny fananahana (FP/RH) ao amin'ny programa FAHASALAMANA FENO, napetraky ny Amref Health Africa any Kenya. Manome fanazavana ho an'ireo mpanolotsaina ara-teknika sy mpitantana ny programa izany ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana17122 hevitra